Baqattoonni Itoophiyaa 15 konteenarii keessatti dhumanii argaman - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Baqattoonni Itoophiyaa 15 konteenarii keessatti dhumanii argaman
Yaaliin baqattoota kanaa Afrikaa Kibbaa seenuuf ture.
Baqattoonni Itoophiyaa Koongoo gara Zaambiyaa imalaa turan keessaa 15 ‘konteenarii’ keessatti dhumanii argaman.
Kaayyoo fi hawwiin baqattoota kanniinii Afrikaa Kibbaa seenuu turee; daandii irratti aabjuu ta’ee hafuu osoo baatee. Kana duras bifuma walfakkaatuun baqattoonni Itoophiyaa daandii dhoksaatiin Afrikaa Kibbaa seenuudhaaf yeroo carraaqanitti konkolaataa cufaa keessatti ukkaamamaa dhumaati kan turan.
Maddi rakkoo kanaa biyyoonni Itoophiyaa fi Afrikaa Kibbaa jidduu jiran lammiileen Itoophiyaa karaa seera-qabeessaan dachii isaanii akka hin qaxxaamurre dhoorguun isaaniiti. baqattoonni fala biraa arguu dhaban daandii du’aa fi dukkanaa filachuudhaaf dirqaman. Lammiileen Itoophiyaa seeraan ala Tanzaaniyaa, Zaambiyaa, Maalaawii fi Mozaambik keessatti qabaman hidhaa woggaa hedduun erga adabamanii booda gara Itoophiyaatti kan deebifaman.
Baqattoonni Itoophiyaa du’aa fi gidiraa biyya keessatti isaan mudatu dheefa kan biyya isaanii irraa baqatan. Ta’us kan lubbuun bakka yaade gayu hunda osoo hin taane isa carraa cimaa qabu qofa.
Baqattoota dhuman kana keessa ijoolleen Oromoo meeqa akka ta’an ammatti wanti hubatame hin jiru. Irra jireessatti yaalii Afrikaa Kibbaa seenuu kan godhan ijoollee Oromoo fi isaan worra Kibbaa ta’uun ni beekama.
daadnii irratti dhumuu
rakkoo afrikaa kibbaa
Previous articleMootummaan Itoophiyaa lubbuu Oromoo 400 ol galaafachuu isaa HRW addeesse
Next articleAwodaayitti Woyyaaneen ijoollee Oromoo 5 ajjeestee heddu ammoo madoo taasiste